Usoro pụrụ iche, gbakwunye ntụpọ seramiiki dị anya, dị mma maka vertebra cervical, periarthritis nke ubu, akwara akwara lumbar, ọgwụgwọ inyeaka ihe mgbu ikpere.
Ngwa mgbapụta mberede
A haziri ngwa nnapụta mberede ka ọ bụrụ obere akpa enyemaka mbụ maka ebe ọrụ. Ejiri ya na akpa nylon zippered dabara adaba nke a na -ebuga ya n'akụkụ onye ọrịa, ngwa a na -enye ike ịgwọ mmerụ ahụ ebe ọrụ na -enwekarị uru nke inwe ike ijikwa nnukwu ọbara ọgbụgba na Tourniquet, njem nlegharị anya kacha dịrị nchebe ma dị irè na ahịa taa.
Ngwọta plasta ahụike na-eme ka ọ dị mma
Maka mgbatị anụ ahụ na coid compress physiotherapy.
Ogo dị elu karịa 38 ℃, agba na -agbanwe site na odo odo ruo pink.
Ogo dị n'okpuru 38 ℃, agba na -agbanwe site na pink ruo odo odo.
Naanị maka ọgwụgwọ anụ ahụ dị nro mechiri emechi.
Mmetụta jụrụ ajụ oyi na -adịru awa asatọ.
Ọ dị mfe itinye ma wepu ya, ọ gaghị ahapụkwa ihe fọdụrụ.
Dị nwayọọ na akpụkpọ ahụ (mpempe akwụkwọ gel na -adịghị ike/Hydrophilic Polymer ejiri).
Ọnụ ojiji nke igwe ihe ọkụ ọkụ na-arịwanye elu, na ugboro ole ihe mberede ọkụ na-arịwanye elu karịa ka ọ dị na mbụ. Iji mara nka mgbapụ mberede ihe mberede, ọ dị ezigbo mkpa ịnwe ngwungwu ihe mberede ọkụ n'ụlọ.
Ngwa ọdachi eke
Mgbe ọdachi ndị na-emere onwe ha dịka ala ọma jijiji, ebili mmiri, apịtị apịtị, ajọ ifufe na-eme na mgbe ọdachi mere, nye nri na-akwagide ndụ, mmiri, ihe enyemaka mbụ na ngwa ihe mberede maka ịlanarị, nnapụta.
Ahụike Ọrịa Ọrịa shuga. Ọpụrụiche ya na -eme ka o kwe omume ịbanye n'ime akpụkpọ ahụ ndị ọrụ dị mkpa n'ime arịa ọbara.
Nnyefe n'ime ọbara na -ewebata ihe ndị dị mkpa na sistem ọbara nke na -ebelata ọkwa shuga.
Na -agazu akụkụ ahụ niile, ha na -erute ndị chọrọ ọgwụgwọ. Iberibe ọrịa shuga na -emetụta ahụ mmadụ site na mpaghara navael.
A na -etinye mkpokọta ihe ọkụkụ na patch, jiri nwayọ na -enyere aka na usoro onunu ogwu iji mezie ọkwa shuga dị n'ọbara. Ezubere patch ọrịa shuga ka ọ gwọọ mpaghara akụkụ arịa ọrịa shuga, nyere aka belata ihe mgbaàmà sitere na neuropathy na -arịa ọrịa shuga dị ka mgbu miri emi, mkpụmkpụ ume, ebe nchekwa adịghị mma, mmamịrị ugboro ugboro, ọgbụgbọ na mgbu na aka na ụkwụ.
Ngwugwu:36 Ahịhịa. 8mm * 24ea + 12mm * 21ea
Ngwọta Silicone Scar-Ncha
A na-eji mpempe silicone dị elu nke ejiri ụlọ ọgwụ na ndị dọkịta na-awa plastik mee mpempe akwụkwọ, na-enye ụzọ ọgwụ na-adịghị emerụ ahụ iji meziwanye agba, nha, udidi, na ọdịdị nke ọnya hypertrophic na keloids na-ebutekarị ngalaba C. , ịwa ahụ, mmerụ ahụ, ọkụ, ihe otutu, na ndị ọzọ.
Mpempe akwụkwọ mwepụ Scar dị mma ma dịkwa irè maka ma ihe ochie ma nke ọhụrụ. Site na iberibe ọhụrụ, enwere ike iji akwa ahụ ozugbo anụ ahụ gwọchara (enweghị kpụ ọkụ n'ọnụ ma ọ bụ na -agbaze site na ntụpọ ochie, enwere ike iji ya oge ọ bụla, na -eche na akpụkpọ ahụ agbakeela. Uru dị n'iji ihe nfụkasị ochie eme ihe bụ ime ka ịdị nro dị nro ma weghachi akpụkpọ ahụ ahụ.
Ọgwụ Silicone Scar Gel-Wound Solution
A nwalere ya n'ụlọ ọgwụ wee gosipụta na ọ ga-emezi ụcha, nha, udidi na ọdịdị nke ọnya site na ịwa ahụ, mmerụ ahụ, ngalaba c, usoro ịchọ mma, ọkụ ma ọ bụ ihe otutu.
Silicone ọgwụ nwere ọrụ nke imeziwanye ihe owuwu epidermal, belata mkpọchi capillary na collagen fibrosis, melite metabolism anụ ahụ na inye nri, yana igbochi nguzo ọnya hypertrophic.